Nri ụtọ nduku na cheese croquettes | Bezzia
Nduku na cheese croquettes
Maria onyekwere | 27/04/2021 10:00 | Ndị mbido
Mgbe anyị hụrụ ndị a ụtọ nduku na chiiz croquettes na profaịlụ nke onye na-edozi ahụ na-edozi ahụ bụ Raquel Bernacer anyị maara na anyị ga-akwadebe ha n'ụlọ. Mgbe ahụ anyị gafere nsogbu ahụkarị: Enweghị m nke a ma ọ bụ na anaghị m ejikarị ihe a eme ihe na kichin m ... mana ihe niile nwere ihe ngwọta!
Ndị a croquettes anaghị achọ ịkwadebe akwa bekee iji dị ka ndị ọdịnala. A na-akwadebe mgwakota agwa site na ijikọta anụ a sweetara n'ọkụ, cheese, ude na gelatin, tinyere ihe ndị ọzọ. Jelii? Can nwere ike ịhapụ ya mana kedu ka ị ga-esi nwee oge iji lelee mgwakota agwa adịghị mfe ọbụna iji ya.
Oge iji mepụta croquettes bụ nke kachasị mma. Ime mgwakota agwa dị mfe, mana mgbe ịhapụ ya zuru ike na ngwa nju oyi, oge eruola ịkwadebe croquettes. You gaghị enwe ike iji aka gị kpụọ ihe ndị a, dị ka nke ọdịnala. Ga-achọ ngaji abụọ na ndidi iji mee ya. Ugbu a ya ụtọ uto na creamy udidi nke croquettes ha kariri imeju ya.
385 g. meatara anụ nduku asara n'ọkụ (1 nnukwu poteto)
1 mpempe akwụkwọ nke gelatin na-anọpụ iche
60 ml. ude na abụba 35%
Otu ngaji nke butter
Nnu nụrụ ụtọ
Nwa ose nụrụ ụtọ
55 g nke mozzarella (gbanye ya nke ọma)
Ihunoku ụtọ nduku. Iji mee nke a, kpoo ọkụ ahụ na 200ºC, saa nduku ahụ nke ọma ma dowe ya na tray oven nke etinyere obere mmanụ oliv. Ime minit 45 ma ọ bụ ruo mgbe emechara. Wepu ya n’oku wee juo.
Ka ọ jụrụ, hydrates na gelatin n'ime nnukwu efere na mmiri ọkụ maka nkeji ole na ole.
N'otu oge ahụ, kpoo ude n'ime ite n’ekweghi ya ka o sie. Ozugbo na-ekpo ọkụ, wepụ ya na okpomọkụ, gbakwunye gelatin ma gwakọta ya ruo mgbe ọ ga-adaba ma tinye ya.
Ozugbo ụtọ nduku dị ọkụ, wepụ pulp ma tinye ego ahụ egosiri na nnukwu efere, jiri fọk gwerie ya.
Tinye gbazee butter, ude na gelatin, chiiz na oge ịtọ ụtọ. Gwakọta nke ọma, gbalịa ma ọ bụrụ na ị ga-edozi isi nnu ma tinye ya na ngwa nju oyi maka otu awa, na-ekpuchi efere ahụ na plastik.
Oge gafere, etolite na croquettes iji ngaji abụọ. Jiri nwayọ tụgharịa ha na ntụ ọka, akwa a kụrụ, na achịcha achicha. Tinye ha na ngwa nju oyi maka elekere ọzọ tupu ị ghee ha.
Finalmente igwa croquettes na mmanụ dị ukwuu kpoo na ogbe, na-ekwe ka abụba buru ibu kpochapụ na akwụkwọ absorbent ka ị na-ewepụ.
Ije Ozi na-ekpo ọkụ ụtọ nduku na cheese croquettes.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Ntụziaka » Ndị mbido » Nduku na cheese croquettes
Typesdị iko 5 iji mezue tebụl gị
Ọ ga - ekwe omume ịmekọrịta mmekọrịta enyi na enyi gị?